Ụgbọ mgbagha na Miami International Airport
Ihe karịrị nde ndị njem 40 na-agafe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elekere 400,000 kwa afọ na Airport Miami International, n'ihi ya, ị maara na ị ga-asọba n'otu ebe a na-ewu ewu nke na-akụda ụlọ ọrụ ndị magburu onwe ya. Ihe ọzọ bụ na ọ bụ naanị 15 nkeji ụgbọala na-agba ọsọ FL-836 E ruo obodo Miami, yabụ ịnya ụgbọ ala na Miami Airport na-eme ka uche zuru oke na ụzọ kachasị mma iji chọpụta Southern Florida.
Dị ka ọtụtụ ọdụ ụgbọelu North America, Miami nwere ụlọ ọrụ ịgbazinye ụgbọ ala raara onwe ya nye, nke a maara dịka Obodo Miami International Airport Car Rental Center (RCC). Nke a kachasị mma site na MIA Mover, bụ ndị na-emegharị ngwa ngwa nke 1.25, nke na-ejikọta oghere 3 nke Miami Airport na Central Station na RCC na-eme ka mmadụ niile wee bulie ma kwụsị usoro ikuku.
N'ihe ngosi nke Florida dịka ebe ọ na-aga, ọ bụ ihe ijuanya na Miami Airport bụ nnukwu ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala. N'ezie, ọdụ ụgbọelu bụ ebe obibi nke 6500 ugbo ala na-eme ya otu n'ime ebe kachasị ụgwọ kachasị ụgwọ n'ụwa.
Enyemaka na-enyere aka ịkwụsị nrụgide site n'ịhazi ụgbọ ala na mbute site na ikwe ka ndị njem na-atụle ihe kachasị mma maka ụgbọ ala na Miami Airport sitere na ụdị ụwa niile a ma ama na ntụrụndụ nke kọmputa gị, mbadamba ma ọ bụ ọbụna ekwentị mkpanaaka.
Ndị ọrụ mgbazinye ndị a gụnyere Alamo, Nyocha, Budget, Europcar, Hertz na Sixt na mmekọrịta anyị na ogologo oge anyị na-eme ka anyị nwee ike ịkwasa ọnụahịa kachasị mma maka ebe ndị ụgbọ ala Miami Airport ga-enye gị ohere ịchọta ihe dị ukwuu tupu ị apụ n'ụlọ .
Ịga na / si na Miami Airport
Site na ube
Miami na-eje ozi site na ọdụ ụgbọelu mba abụọ; Mba Miami International na Fort Lauderdale International, ọ bụ ezie na mbụ na-enye ndị ọrụ na-eje ozi kpọmkwem site na UK. Ọdụ ụgbọ elu dị na kilomita asatọ site n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Miami na ọdụ ụgbọ elu kachasị elu na steeti Florida, na-elekọta ndị njem 34 nde kwa afọ.
American Airlines - na / London London Heathrow.
British Airways - na / London London Heathrow.
Virgin Atlantic - site na London Heathrow.
Ịga na Ogbe Ndịda Miami Site na Ọdụ Ụgbọelu Mba Nile
Site na Bus
Ngalaba Miami-Dade Transit (www.miamidade.gov/transit) nyere ọrụ Metrobus na mpaghara Miami-Dade County na / site na ọdụ ụgbọ elu. A pụrụ ịchọta ọdụ ụgbọ ala na Ọkwa 1 nke Terminal E.
Site na ịzụ
Ọrụ Metrobus nke Ngalaba Miami-Dade Transit na-ejikọ na Tri-Rail (www.tri-rail.com) nke netwọk ụgbọ okporo ígwè dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ọdụ ụgbọ elu. Njikọ dị n'ihu ga-adị na ngalaba Broward na Palm Beach. Ọ bụrụ na ị nwere ụgbọelu ụgbọ elu, njem gị na-eji usoro a nke njem a bụ n'efu.
Ịga n'ime obodo Miami dị nnọọ mfe site na ọdụ ụgbọ elu. Site na obodo ahụ, weghaara Interstate 95 na LeJeune Road na ugwu ugwu ebe ị ga-amalite iburu ihe ịrịba ama maka ọdụ ụgbọ elu. Ọ bụrụ na ị na-eme njem si n'ebe ugwu, weghaara Interstate 95 n'ebe ndịda na SR112. Site n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ, buru SR826 n'ebe ugwu ma pụọ ​​na LeJeune Road na ugwu ugwu ebe ị ga-eburu ihe ịrịba ama maka ndị ọrụ ụgbọ elu ụgbọ elu.
Ụgbọ ala ụgbọala
Enwere ike ịchọta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Ntọala 1 nke mbubata mpaghara mgbe ị bịarutere. Debe ya na Carrentalchoice.com tupu ị gaa ma nweta ọnụego ego, na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ mmezi ụgwọ.
Site na ugbo
Ndị na-ebu ndị taxi na ndị na-elekọta Supershuttle (www.supershuttle.com) dị na ụlọ mbata (ala) nke ọdụ ụgbọ elu n'èzí ebe ndị a na-akwụ ụgwọ akpa. Maka ọnụego, gaa http://www.miami-airport.com/html/taxi_and_shuttle_service.html.
Ụgbọ ala mgbazinye ụgbọ mmiri na Miami Airport
OWU OZI OZI Miami - Airport (MIA), Ogbe Miami
Ulo oru ugbo AVIS - Airport (MIA), Miami Intl Airport
OZI OZI UTURA Miami - Airport (MIA), Ulo nke Miami Ụgbọ mmiri maka ụgbọ mmiri
UTURA OZI Ugbo Miami - Airport (MIA), Sears Auto Center - Coral Gables
3655 Southwest 22 Street (na Douglas Rd)
Ulo oru ugbo AVIS - Airport (MIA), West nke Miami Airport
Alamo Car Rentals Miami - Airport (MIA), Miami Ogbe
Alamo Car Rentals Miami - Airport (MIA), Miami Intl Arpt
Ebe ndi ntinye ego na Miami - Airport (MIA), Miami
Ebe ntinye ego nke Miami - Airport (MIA), Miami Coral Gables Sears
Ebe ntinye ego nke Miami - Airport (MIA), Miami Intl Airport
Ulo ala ugbo Miami - Airport (MIA), Port Miami
Ụgbọ ala ụgbọala Miami - Airport (MIA), Miami Intl Airport
Ụgbọ ala ụgbọala Miami - Airport (MIA), Port Miami
Port nke Miami FL 33142
Europcar Car Rentals Miami - Airport (MIA), Miami Intl Airport
Biko Gaa na Ntuzi Utu
3900 Nw 25th Street - 404 Suite
Ebe ndị ọzọ Hertz Miami - Airport (MIA), Doral HLE
Ebe ndị dị na Hertz Miami - Airport (MIA), East Hialeah HLE
Ụgbọ ala Hertz Miami - Airport (MIA), Landmark
Ụgbọ ala Hertz Miami - Airport (MIA), Miami Airport Marriott
Ebe ndị dị na Hertz Miami - Airport (MIA), Miami Central HLE
Ụgbọ ala Hertz Miami - Airport (MIA), Miami DT HLE
Ebe ndị dị na Hertz Miami - Airport (MIA), Miami Intl AP
Ụgbọ ala Hertz Miami - Airport (MIA), Miami Marriott Biscayne
Ụgbọ ala Hertz Miami - Airport (MIA), THE BILTMORE HOTEL
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ FL 33134
Ebe ndị Sixt Car Miami - Airport (MIA), Miami Downtown
Ebe ndị Sixt Car Miami - Airport (MIA), Miami Airport International
Ugbo ala ugbo ala Miami - Airport (MIA), Miami Intl Airport
Ulo ala ugbo ala Miami - Airport (MIA), Port Miami